Borosio ny amin'ny fomba hitsena ny amboahaolo mahay maneho hevitra indrindra tao an-tanàna amin'ny slots site. Impeccably nanao akanjo iray tux, Mr. Foxin miaramila nandresy no milalao ity 5 reel 25 payline finday sy ny biraonao slot lalao. Mamirapiratra ny manan-karena sy miavaka rivotra ny olona (??) in didy, izy sy ny Pups dia mandraraka anao ny malala-tanana sy ny Fandresena.
Fox nandresy fanehoana an'ohatra
The 3D manan-karena, amboahaolo nanana lohahevitra finday sy ny biraonao slot maka ny mofomamy ho an'ny hakingan-tsaina sy ny famoronana. Iza no Nanonofy ny amboahaolo manan-karena sy ny taranaky ny pups no hampisambotra anao ny manampy tanana mba handresy ny fakam-panahy, ary tena be karama Fandresena? Exquisitely namorona ny hetsika atao ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny fatratra amin'ny pups-tsokosoko momba sy nilalao teo amin'ny reels. Maneho famantarana ny harena dia ny fiara, volamena loharano, fitoerana sy ny volamena samy namboatra karatra fanehoana an'ohatra.
Wilds: Ny tompon-trano tsara tarehy, Mr. Fox hita eo ny reels mba hitondra mba azy, amin'ny solon'i ny sisa amin'ny marika. Hanatanteraka io asa io, ary afaka handresy 2,000 vola madinika toy ny tombony noho ny fanampiany azy.
Scatters: Ny Foxin nandresy lalao tsy tiany hiverina foana ianao polo. Tadiavo ny niparitaka vilany nisy ny Volamena famantarana na aiza na aiza eo amin'ny reels ary afaka handresy ny ho 100 times the wagered bets.
Vitao ny fitsidihana ny Fox Mansion, ny mahatonga ny 10 maimaim-poana lalao sy droa ny Fandresena. Jereo fotsiny ny 3 na mihoatra noho 3 ny niely patrana Volamena vilany nisy ny marika eo amin'ny reels ary afaka hitarika indray ny maimaim-poana spins lalao. Ny mahafatifaty pups hahatonga azy mihoatra mahafinaritra feno avy amin'ny fihodinana ho eny an-reels sy manampy ny bibidia marika.
Ny Fox Pups fotsiny tsy afaka mijanona mbola ary miseho ho eny an-reels nitodika azy ireo ho any an-tampon-tanety. Tena azo atao ny mifehy ny antics amin'ny alalan'ny filalaovana ny Super Bet Feature. Afaka haka iray Pup ny 3RD miraingiraingy azon'ny amin'ny alalan'ny fandoavana 25 coins. Aloavy 35 na 50 vola madinika, ary mijery azy ireo hiverina 2, 3 and 4 reels, na rehetra ho eo an-tampon-tanety reels isanisany.
Afaka mampitombo ny manokana Fox ny Fund amin'ny alalan'ny fanekena ny fahalalahan-tanana ny Mr. Foxin Wins. Izy no ambony ambony ny fifandanjana tsapaka. Fa raha tsy izany, dia handefa anareo hahita ny leprechaun sy tsara hanozongozona azy ka hahafoana ny am-paosin'ny amin'ny Leprechaun hampihorohoroiko Down endri-javatra.
Misy vola hafa nihodidina endri-javatra miandry anao. Gamble ary handresy na ny 2x na 4x multiplier amin'ny alalan'ny karatra marina mihevitra fa loko na ny karatra fitoriana tsirairay avy.
Dia nandray ny ambony toerana noho ny miavaka 3D sary, fanentanana sy ny voly feno manatona ny foto-kevitra tsy manam-paharoa, Fox mandresy mamely ny jackpot. Miaina ao amin'ny foxy mandray vahiny ary hitondra an-trano ny fanomezana ny mampitolagaga nisaraka Fandresena.